अभागी खाने बेलामा रिसाउँछ
[2015-01-17 오전 11:40:00]
अभागीलाइ खाने बेलामा रिस उठ्छ रे ! यो चल्तिको नेपाली भाषाको उखान हो । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस, एमालेका नेता त्यस्तै पात्र हुन । पहिचानसहितको संघीयता मानेर गए देशले एउटा निकास पनि पाउने थियो र नेपाली जनताको एकता पनि सुदृढ हुने थियो । संगसंगै कांग्रेस, एमालेको अस्तित्व पनि नेपाली जनताले स्विकार्ने थिए । तर अब कांग्रेस र एमालेका नेताले सिंगै पार्टीमात्र हैन तिनलाइ समर्थन गर्ने तथाकथित टपरटुँइया वर्ग, कार्यकर्ता सबैलाइ इतिहासकाे "ग्याँस च्याम्बर"मा हालेर जाने मनसुबा बनाउन थालेका छन् । अझै पनि यिनको सद्बुद्धि पलाओस ! पहिचानलाइ स्विकारेर संविधान निर्माण गर्न राजी भए आउने दिनमा पनि नेपाली राजनीतिमा उनीहरुको हैसियत राम्रै हुनेछ । जसरी १२ बुँदे समझदारी गरेर दोस्रो जनान्दोलन पछि ७ दलको नाममा यिनको हैसियत रह्यो । अन्यथा यिनको नियती डाइनोसोरको जस्तो हुनेछ ।
तर, अभागीलाइ रिस उठीसकेको रैछ । हिजोमात्र शान्ति बाटिकामा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनजाति नेताहरुमाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप भयो त्यसले यिनको बुद्धिको भाँडोमा बिर्को मजैले लागेको रैछ भन्ने थाहा भयो । कमल थापाले संघीयताको बिरोध गर्दा, मरिसकेको राजतन्त्रलाइ ब्युताउँछु भन्दै धामीझाँक्रि झै देशाटन गर्दा कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया नदिने बरु उल्टै आफना कार्यकर्तालाइ हिन्दुवादी अभियानमा लगाउने यिनको अभियान आए दिन देखिएकै हो । यसरी नेपाली जनतालाइ उत्पीडनको जाँतोमा पिसेर सोम शर्माको सातु खाने सपना देखिरहेका छन् ।
लागेको बानी :
लागेको बानी कसले छोड्छ ? ति बामदेव गौतम नामका ति तनै पात्र हुन जसले माओवादी विद्रोह चर्कदै जाँदा माओवादीलाइ दबाउन "आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक एेन" ल्याएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको हातको टीका प्रतेक वर्ष दशैंमा ग्रहण गरी आशिर्वाद लिन्थे । ज्ञानेन्द्रले लात हानेपछि मात्र माओवादीको तत्कालीन काखमा लुटुपुटु गर्न पुगेका हुन् । अब फेरी सत्तामा पुगेका छन अब उनलाइ कुनै माओवादी वा तत्कालिन माओवादी जस्तै राँको भएर उत्रिएका आदिवासी, जनजाति चाहिएको छैन । तबत उनी बहुदलकालीन गृह मन्त्री जस्तो भएर निस्केका हुन ।
राजा ज्ञानेन्द्र त सत्तामा छैनन् । अब उनलाइ छोटे राजाहरु कमल थापा, खुमबहादुरहरुको सहयोग चाहिन्छ । थापा र खड्काको गाइको पुच्छर समाएर मात्र उनी वैतर्णी नदी पार हुनेछन् । यो कुरा पनि कमल थापास‌ग सदनमा भनाभैरी हुँदा गौतमले 'म पनि हिन्दु कम्युनिष्ट हुँ" भनेर थापासंग माफी मागेपछि प्रस्ट भएको छ । यस्ता अजिबोगरिव पात्रले जनजातिले भासन गरेको देखि नसहनु कुनै अनौठो होइन ।
उखान तुक्कादेखि उखान तुक्कासम्म :
नेपाललाइ सतीले सरापेको देश पनि भन्छन । सतीले सरापेकोमा कति दम छ त्यो अन्धविश्वासीले जान्ने कुर भो । तर यिनमा नेपालको परिवर्तनलाइ रोक्ने उपाय उखान तुक्का बाहेक अर्को चिज रहेन छ । ओली बा उखान तुक्काको भरमा परिवर्तनलाइ रोक्ने एकमात्र उपाय गँजेडीको सम्राट बन्ने गफ जस्तो मात्र हो । यिनले मधेसीलाइ देशद्रोहीमात्र देख्छन् । आफनै हातले महाकाली बेच्दा पनि यिनी चैं देशभक्त रहिरहने यिनका तुक्का पनि जानि नसक्नुका । जनजातिलाइ भुरेटाकुरे रजौटा देख्छन् । महिलालाइ देख्दा चै‌ के भन्दा गर्दा हुन कुन्नी ? लाजको सरम यिनी पो गाइगोडे बिचार बोकेर कता लागेका हुन ?
अर्का पात्र हुन माकुने यिनको के कुरा । जता बतास चल्यो यिनका जुँगा तेतै हल्लीन्छन्। ज्ञानेन्द्रलाइ दाम राखेर ढोगे । दक्षिण ढोकाबाट निवेदन हाले । पशुपतिनाथको कृपाकाे लागि पशुपति मन्दीरमा एक बटुको तेलसहित कनकर्नो चढाए । तेतीले पनि नभएपछि इटहरीस्थित गाइ राप्रपा नेपालका समानुपातिक सभासद रामकुमार सुब्बाको चिन्तन चौतारी नामको होटल भित्ररहेको उन्मत्त शिव लिङ्गमा ४ हजार रुपैया भेटीघाटी चढाए । यिनमाबट अब के आश गर्ने ?
अर्का पात्र हुन । मोडेल खनाल । यिनको कुलपुँजी भनेको फेसन र पैसा कमाउनु मात्रै हो । यिनलाइ श्रेष्ठ टेलरिङ्ग भन्दा राम्रो फेसन डिजाइन गर्न बाहेक केहि आउनेवाला छैन ।
कांग्रेसी नेताको कुरा गर्नु नै बेकार छ । जातै जम्दार । यिनका शिर्ष नेतालाइ उ गरेर उ गर्नमात्र आउँछ । बाँकी दोस्रा दर्जाका नेता कोही खसखसे छन कोही भकभके ।यस्ता पात्रहरुलाइ खानेबेलामा झोँक चल्नु स्वभाविकै हो । यस्ताको पछि लागेर मुलुकको अहित चिताउनु अर्को बेइमानी !